ဖယောင်းတိုင် မထွန်းစေချင်ပါ…(ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ဆောင်းထားသည်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဖယောင်းတိုင် မထွန်းစေချင်ပါ…(ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်ဆောင်းထားသည်)
Posted by Davit on May 23, 2012 in Copy/Paste | 33 comments
ကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့တစ်ခုကတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ မီးတွေပျက်/ဖျက်/မလာ တဲ့ကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီး သိရသမျှလေးတွေကိုပြောထားတာပါ။
ကျွန်တော့်တို့မှာ ညီအကို3ယောက်ရှိပါတယ်…အဲ့ဒိထဲကမှကျွန်တော်ကအကြီးဆုံးပါ။ ကျွန်တော့်ညီအငယ်ဆုံးက BE.EP နဲ့ကျောင်းပြီးသွားပြီး 1 နှစ်ခွဲလောက်အကြာမှာ ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်မှာ အလုပ်ရုံခွဲမှူးရာထူးနဲ့တာဝန်ကျတာ ခုဆိုရင်3နှစ်ခွဲလောက်ရှိပြီပေါ့။ ဒီနေ့မနက်ပဲ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တက်မင်္ဂလာအတွက် သူပြန်ရောက်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ သူနဲ့မီးအကြောင်းကိုစကားစပြောဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်ကမေးတာပေါ့… “မန္တလေးနဲ့ ရန်ကုန်တို့မှာ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး မီးလာဖို့အတွက်ဆန္ဒပြနေကြတာမင်းတို့သိတယ်မဟုတ်လား” လို့မေးတော့။ သူကပြန်ဖြေပါတယ် “ဆန္ဒပြလည်း လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာနတွေဘက်က ဘာမှမတက်နိုင်ကြဘူး အကို ”တဲ့…..ဒါနဲ့ကျွန်တော်က “ဟေ….ဒါဆိုမင်းတို့ဝန်ကြီးဌာနကလူကြီးတွေက ပြည်သူတွေကို သောက်ဂရုမစိုက်တာလား…သောက်ရေးမလုပ်တာလား” ဆိုပြီးမေးတော့ သူက “အာ…အကိုကလည်း…အဲ့လိုဆန္ဒပြလို့သူတို့လည်းခေါင်းမီးတောက်နေတယ်…ကျွန်တော်ပြောချင်တာက မိုးမှမရွာတာ..မိုးမရွာတော့ ဆည်တွေမှာရေကအရမ်းနည်းနေတယ်… ပေးချင်ပေမဲ့ လုံးဝကိုပေးမရဘူး…ဥပမာ..မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကြီးဆုံးဆိုတဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ ရဲရွာမှာဆိုရင်တောင် စက်လေးလုံး(တာဘိုင်လေးလုံး)ရှိတယ်အကိုရာ…တာဘိုင်တစ်လုံးကိုအပြည့်လည်ရင် 200 မဂ္ဂါဝပ်ထွက်တယ်…ဒီတော့4လုံးအပြည့်လည်ရင် 800 ထွက်တယ်အကိုရာ…ဒါဆိုရင် မပိုဘူးဆိုတောင်မှ ပြည့်ပြည့်ဝဝနီးပါးပေးနိုင်တယ်..ခုတော့ ရေအရမ်းနည်းနေလို့ တစ်ရက်ကို တာဘိုင်2လုံးဘဲလည်နေရတယ်။ ကျန်2လုံးက လုံးဝကိုရပ်ထားရတာ… အဲဒိလည်နေတဲ့2လုံးတောင် တစ်လုံးကို 90 နီးပါးပဲရအောင်လည်နေရတာ… ရေမှမရှိပဲဗျာ…. သဘာဝဓါတ်ငွေ့နဲ့လည်တဲ့စက်ရုံတွေဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပါးပါးလေးပဲရှိတာ…ဒီလိုပါးပါးလေးရှိရတဲ့ကြားထဲ ဓါတ်ငွေ့ကလည်းမရတော့ သူတို့ဆို ငုတ်တုတ်….. ဒီကြားထဲ ဗုံးပါအခွဲခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အကိုရယ်တွက်ကြည့်ပါ… ဒါပေမဲ့မကြာပါဘူး… တစ်လလောက်ကြာရင် အားလုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်…တစ်ကယ်တော့ ဆုတောင်းတဲ့သူတွေက တစ်ခြားဆုတောင်းတာထက် မိုးမြန်မြန်စောစောရွာပါစေဆိုပြီးဆုတောင်းရမှာ အကိုရ” ဆိုပြီးကျွန်တော့်ကိုရှင်းပြပါသတဲ့။
ဒါကတော့ ခုဏလေးတင်ကျွန်တော်ရယ် ကျွန်တော့်ညီ(အရင်း) ရယ်နေ့လည်စာထမင်းလက်ဆုံစားရင်းပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ စကားဝိုင်းက အဖြစ်လေးတွေပါ….
(ကျွန်တော်ရော ကျွန်တော့်ညီ2ယောက်စလုံးက ဝန်ကြီးဌာနမှာလုပ်တဲ့မိဘတွေကပေါက်ဖွားလာကြပေမဲ့ … အေးဆေးနေတတ်တဲ့အမေကလွဲရင် အားလုံးက NLD ပါတီဝင်တွေပါ……..ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုချစ်မြတ်နိုးနေတယ်ထင်မှာဆိုးလို့ပါ။)
မှက်ချက်….အကြောင်းဆက်ရင် မနေ့ညနေ6နာရီလောက်ကနေ9နာရီလောက်ထိ လှိုင်မြို့နယ် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှာ မြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးပွဲနဲ့ ဆယ်စု/ရာစု/ထောင်စု စည်းဝေးပွဲမှာ ကြံ့ခိုင်ရေး ကလူကြီးတစ်ချို့သုံးသွားခဲ့တဲ့ စကားလေးတွေရေးချင်သေးသဗျို့…..ရီစေချင်လို့ပါ။)
ဆန္ဒ နဲ့ မကျေနပ်မှုကို ဒီလောက်ထုတ်ဖော်ခွင့်ရရင် တော်လောက်ပြီထင်တယ်။
ဆက်ပြီး ဆန္ဒတွေပြ မဆိုင်တာတွေပါ လျှောက်ပြော လုပ်နေရင် မကောင်းဘူးထင်တယ်။
ချက်ချင်းဖြစ်မလာနိုင်မှတော့ ဒေါသထွက်တယ် နောက်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် စီစဉ်ပါ ဆိုတဲ့သဘောမျိုး အသိပေးပြီး ရပ်လိုက်သင့်ပြီ။ တစ်ဘက်က သဘောကောင်းတိုင်း စွတ်မလုပ်သင့်ဘူး။
သဘာဝအရ ရေနည်းနေလို့ လျှပ်စစ်မီးမရနိုင်တယ်ဆိုတာကို နားလည်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတုံးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးပြီး လျှပ်စစ်အကြောင်းသူလောက် သိတဲ့သူမရှိဘူး ၊ ပိုနေလို့ရောင်းတာပါပြောခဲ့တဲ့ အရူးရဲ့ မစဉ်းစားမဆင်ခြင်ပြောခဲ့တာကို ခံပြင်းလို့ ဆန္ဒတွေထုတ်ဖော်တာပါ။
ပြီးတော့ အခုဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေက ၂၄နာရီ လျှပ်စစ်မီးလာဖို့ပြောနေကြတာမဟုတ်ဘူးနော် လျှပ်စစ်မီး တစ်နာရီဘဲပေးရင်တောင် မီးအားလေးပြည့်စေချင်ကြတာပါ၊လာတဲ့အချိန်လေး မီးအားပြည့်မှ အဓိကရေစက်မောင်းရမှာလေ။ အခုက မီးလာပေမဲ့ မီးလုံးဘေးနား ပိုစုန်းကြူးဖြတ်ပြန်ရင်တောင် မီးလုံးလေးကမျက်နှာငယ်ပြီး သူအလင်းထက်သာလို့ငေးနေရတဲ့ဘ၀ပါ။
အားလုံးကနားလည်ပါတယ် လျှပ်စစ်မီးက အခုဆို ၂၄နာရီ လာတာမဟုတ်ဘူး ၂ ရက် ၄ နာရီ လာတာဆိုတာ။
အစိုးရအနေနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြည်သူတွေကို တင်ပြဖို့သင့်ပြီလို့ထင်ပါတယ်…
အရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းက သတင်းစာတွေမှာ လျှပ်စစ်မီးအားတွေ ဘယ်လောက်မီဂါဝပ်ထွက်နေပြီ…
မကြာသေးခင်မှာ ဘယ်လောက်မီဂါဝပ်ထွက်တော့မယ်ဆိုပြီး လျာအရိုးမရှိပြောခဲ့တာတွေကြောင့်
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လျှပ်စစ်မီးတွေရှိနေရဲ့သားနဲ့ ရောင်းစားပြီး ပြည်သူတွေကိုမပေးဘူးလို့
စုစုပေါင်း လျှပ်စစ်မီဂါဝပ် ဘယ်လောက်အနည်းဆုံးထွက်နေတယ်…
မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကို လျှပ်စစ်မီးပေးရင် စုစုပေါင်းမီဂါဝပ်ဘယ်လောက်ကုန်မယ်…
နောက်ပြီးတော့ ပြည်ပဘယ်နိုင်ငံကို မီဂါဝပ်ဘယ်လောက်ရောင်းစားထားပြီး တစ်နှစ်ကိုဝင်ငွေဘယ်လောက်ရရှိကြောင်းနဲ့ အဲဒီဝင်ငွေတွေကို ဘယ်နေရာတွေမှာ အကျိုးရှိစွာအသုံးချတယ် (သို့တည်းမဟုတ်) တိုင်းပြည်ကြွေးမြီတွေကို ဆပ်နေတယ်ဆိုတဲ့စာရင်းကို
နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကတဆင့် ပြည်သူကို မချွင်းမချန်ပဲစာရင်းရှင်းတန်းတင်ပြဖို့လိုနေပြီလို့မြင်ပါတယ်…
ရှေ့အစိုးရရဲ့အမှားကို နောက်အစိုးရပြင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာ ပါးစပ်နဲ့ပြောနေရုံမရပါဘူး…
အဲဒီလို ပြည်သူပိုင်များကို စနစ်တကျသုံးစွဲပြမှ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်သောသယံဇာတများနှင့် ငွေကြေးများကို အလေးထားတန်ဖိုးသိနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်
နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်သူလူထုပေါ်တွင် ပွင့်လင်းသောသဘောထားရှိမည်ဆိုပါက
၀န်ကြီးအနေနှင့်ရော၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတအနေနဲ့ပါ ခေါင်းကိုက်တာသက်သာမယ်လို့မြင်ပါတယ်နော်…
ကို ကြောင်ဝတုတ်ရေ………. အကို့ comment ကသိပ်ကောင်းပါတယ်ဗျာ…… ဒါပေသိ…ဒင်းတို့က ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြလည်း ရနိုင်တဲ့သူမျိုးတွေမဟုတ်တာဆိုတာကို ကျွန်တော့်ရဲ့နောက် Post မှာရေးပြပါမယ်။ အဖြစ်မှန်ပေါ့ဗျာ…..ရယ်စရာကြီးကိုဖြစ်လို့………..
ဒါဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်တဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေပိုနေလို့ ရောင်းစားရပါတယ်လို့ပြောတဲ့ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးက သူ့စကားအတွက် တာဝန်ယူသင့်တယ် ။(ရာထူးကနှုတ်ထွက်ပေးသင့်တယ်) ။ ပြည်သူတွေက အဲဒီစကားကြောင့်ပိုပြီးဒေါသထွက်နေတာ ။
အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲဗျာ…… Market သဘောတရားအရ ပိုလျှံလို့ရောင်းစားနေရပါတယ် ဆိုတဲ့လူဂျီး နှုတ်ထွက်ပေးလိုက်ရင် ဘယ်သူမှဖယောင်းတိုင်မထွန်းတော့မှာသေခြာတယ်ဗျို့….. နောက်ဆုံးဗျာ သူနှုတ်ထွက်တဲ့နေ့မှာ မီးပျက်နေရင်တောင် ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အိမ်မှာတောင်းဖယောင်းတိုင်မထွန်းဘူးဗျို့…. ကဲ .. ရွာသားတွေရော အဲ့လုပ်ကြမလား…….
မသိတော့ပါဘူး၊ အသုံးမကျတော့ပါဘူးဆိုပြီးအားလုံးကိုတောင်းပန်ပြီး အလုပ်ထွက်။
အဲလိုဆိုလို့ကတော့ ကို Davit ပြေသလိုပဲအိမ်မှာတောင်ဖယောင်းတိုင်မထွန်းဘူး။
ကွန်မင့်တခုက ကဗျာလေးကို အပ်ဂရိတ်လုပ်ထားတာပါ
ကိုဒေးဗစ်က အဆက်အသွယ်လေးတွေ ရှိတော့ ကိစ္စလေးတခုလောက် ကွန်ဖန်းလုပ်ပေး စေချင်တယ်ဗျာ.. ကျနော် ပြန်ရှာတာမတွေ့တော့လို့ပါ
ဟိုးတလောက အွန်လိုင်းမှာ ရွှေလီ-၂ လား၊ တာပိန်-၂ လားပဲ (နာမည်လည်း သေချာ မမှတ်ထားလိုက်မိတာ တောင်းပန်ပါတယ်) တရုတ်နဲ့ ၂၀၀၈ လောက်က ဆောက်ထားတဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းမှာ ဖွင့်ပြီးမကြာ အပျက်အစီးတွေ ပြင်ဖို့ စာတင်တာ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွ ကြည့်လိုက်ရတယ်..။ အဲဒီ အကြောင်းလေး ကျနော်တို့ကို ပြန်တူးပေးနိုင်မလားခင်ဗျာ..။
မေးကြည့်ပေးပါ့မယ်ဗျာ…..နက်ဖြန်ကျရင် သိရင်လည်း သိတဲ့အကြောင်း/ မသိရင်လည်း မသိတဲ့အကြောင်း ပြန်ရေးပေးပါ့မယ်…..
အကိုရွာစားကျော်ပြောတာ ရွှေလီ ၁ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံနဲ့တူတယ်ဗျ….. သူကဖွင့်ပြီး1နှစ်ခွဲလောက်အကြာမှာ အကြီးစားပြင်ဆင်မှုလုပ်ရတဲ့ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံထဲကတစ်ခုပါ…..နောက်ပြီး မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့တရုတ်တို့ပူးတွဲပြီးဆောက်တယ်ဆိုပြီး 2008 နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ မြန်မာ့အသံမှာကြေငြာထားတဲ့ဟာပါ….
နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ အမှက်၁လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဖွဲစည်းမှုနှင့်ရည်ရွယ်ချက် ၄ ရပ်ထဲမှာ ပိုရင်ရောင်းမယ်ဆိုတာမပါခဲ့ဘူးဗျ…..ဟိုလူကြီးအတွက်တော့ပိုနေလို့နောက်ထပ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ချက်(င)ကိုထပ်ထည့်လိုက်တာနဲ့တူသဗျ…..
နိုင်ငံတော်၏ စီပွားရေး နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ အားထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အတွက် နိုင်ငံတော်အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေးကောင်စီသည် အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနကို အမိန့်ကြေညာစာ အမှတ် (၅။၂၀ဝ၆)ဖြင့် (၁၅-၅-၂၀ဝ၆) ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ် ခဲ့ပါသည်။ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ဝန်ကြီးဌာန၏ လက်အောက်တွင် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန၊ ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော် ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း အစရှိသည့် ဦးစီးဌာနနှင့် လုပ်ငန်းဌာနများအား ဖွဲ့စည်းထားရှိခဲ့ပါသည်။ ဝန်ကြီးဌာန၏ ရေရှည်ရည်မှန်းချက်တာဝန် (၄)ရပ်မှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
(က) သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံများအား ကာလတိုအဖြစ် ရည်မှန်း ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရန်နှင့် ရေအားလျှပ်စစ်ကို အဓိကစွမ်းအင် အရင်းအမြစ်အဖြစ်မှီခို အားထားဆောင်ရွက် သွားရန်။
(ခ)စီးပွားရေး ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပိုမိုရရှိစေရန် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရန်။
(ဂ)အနာဂတ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံလောက်မှုရှိစေရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လေလွင့်မှုများ လျှော့ချရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန်။
(ဃ)စွမ်းအင် အရင်းအမြစ်အသစ်များနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ အရင်းအမြစ်များမှတဆင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု တိုးမြှင့်သွားရန်။
အဲဒီ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ အဲဒီစက်ရုံအစစ်
ကျေးဇူးပါဗျ.. ဗစ်ဗစ်ကို ခြစ်သွားပြီ..
ပြည်သူတွေကရော ..ဖယောင်းတိုင်းထွန်းချင်လို့ ထွန်းနေတာ
ဟုတ်ပါ့မလားးး ခင်ဗျား ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေဘက်ကနေ
ကြွေးကြော်ထားတဲ့ အစိုးရက မီးလင်းရေးကိုတောင်
ပြီးတော့ ခင်ဗျားပြောသလို မိုးရွာမှသာ မီးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်
အရင်ကရော မီး ၂၄နာရီ လာခဲ့ရဲ့လားးး
ပြီးတော့ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးကရော ပြည်တွင်းမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေ
နှစ်ပေါင်းများစွာက မွန်းကြပ်မှုတွေ အခုမှ ဖြေလျှော့ခွင့်လေး နည်းနည်းရလာတာပါ..
မိုးရွာမှသာ မီးပေးနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး အကိုရယ်….ကျွန်တော့်ညီကသူ့ရှေ့မှာ မြင်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးကို သူသိသလောက်ပြောပြတာပါ။ သူသိတာက သူတာဝန်ကျတဲ့ဆည်မှာ ရေလုံးဝနည်းနေတယ်…ဒါကြောင့် တာဘိုင်4လုံးစလုံးသုံးမရဘူး….နောက်တစ်လလောက်ကြာလို့ဆည်ရေပြည့်လာရင် တာဘိုင်အကုန်လည်နိုင်မယ်… ဒါပဲသူသိတာပါဗျာ….. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအချို့ကလည်းခက်သားဗျ….စုံစမ်းကြည့်လို့သိရသလောက် အခြားသောနိုင်ငံတွေမှာ ဆည်တစ်ခုတည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင် ဆည်ဆောက်မဲ့နေရာကို အရင်ဆုံး 10 နှစ်ကနေ 15 နှစ်ကြားလောက် Survey လုပ်ကြသတဲ့ဗျာ…ဆောက်မဲ့တည်နေရာရဲ့ နှစ်စဉ်ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကအစ ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ဆောက်သင့်မဆောက်သင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါတဲ့….. ဒီမှာတော့ဖြင့် ချောင်းလေးရေစီးနေပြီဆိုရင် ဆည်ဆောက်လို့ရပြီဆိုပြီးဆောက်ကြသလားမသိ………
အဲ……..နောက်တစ်ချက်က ပိုလျှံလို့ပြည်ပကိုရောင်းတယ်ဆိုတဲ့သူကြီးကတော့ အပြစ်မပြောတော့ပါဘူးလေ…. ဘာကြောင့်သတုံးဆိုတော့ သူကသူ့ကိုယ်သူ တစ်နိုင်ငံလုံးကိုလူသိရှင်ကြားပြောခဲ့ဖူးတယ်မို့လား…. ဘာတဲ့ “ရေအားလျှပ်စစ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး သူ့လောက်သိ သူ့လောက်တတ်တာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုပြီးလေ” ဒါကြောင့် သူ့လည်းအပြစ်မတင်ချင်တော့ပါဘူးဗျာ……….နော့်………
လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဆိုသူ (ဦး) ဇော်မင်း၏သမိုင်းဝင် ပြောကြားချက်
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အခုမဂ္ဂါဝပ် ၁၅၀၀ ပေးတာတောင် ကုန်အောင် မသုံးနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဘယ်သူက သုံးမှာလဲ။ သုံးစရာမရှိရင် market ရဲ့သဘောအရ ရောင်းစားရမှာပေါ့။ သုံးစရာမရှိရင် ရောင်းစားရမယ်။ “လျှပ်စစ်က ထုတ်ထားပြီးရင်လည်း သိမ်းထားလို့မရဘူး။ ထုတ်ထားပြီးရင် သုံးမှ မသုံးနိုင်ရင် ရောင်းမှ။ ဒီ Idea တွေ ဒီဟာတွေက ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံ စက်မှုနိုင်ငံ ဖြစ်ထွန်းဖို့ကိစ္စမှာ လျှပ်စစ် အလွန်အရေးကြီးတယ်။ ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ် ရေးပြီးတော့ သတင်းစာမှာ ထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို ကျွန်တော်ပဲ တည်းဖြတ်ပြီး ကျွန်တော်ပဲရေးပြီး ကျွန်တော်ပဲ ထည့်ခိုင်းလိုက်တာ။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းပါး ပြီးတဲ့နောက် သိပ်ရက်မကြာဘူး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပါတယ်။ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မလုပ်ခင်မှာ ဂျာနယ် တစ်စောင်က ဘာရေးလဲဆိုတော့ ဒီဆောင်းပါး ရေးတဲ့ကောင် ဘယ်လောက်တတ်လို့လဲ၊ ဒီကောင်က ဘာအဆင့်ရှိလဲဆိုတော့၊ ကျွန်တော် မပြောတော့ဘူး။ ညွှန်ချုပ် မင်းရေးတယ်ပြောလိုက်၊ ငါရေးတယ်မပြောနဲ့။ ငါ့ထက်ပိုပြီးတော့ သိနိုင်တဲ့လူ မရှိတော့ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ရေအားလျှပ်စစ်နဲ့
ပတ်သက်ပြီးတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ထက် ပိုပြီးတော့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူ မရှိတော့ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ မင်းပဲ ရေးတယ်ပြောလိုက်၊ ငါရေးတယ် ဆိုလို့ရှိရင် မကောင်းဘူး ဖြစ်သွားမယ်။ အမှန်ကတော့ ကျွန်တော်ပဲ ရေးလိုက်တာ။ ဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့မေးတဲ့ မေးခွန်းတွေ၊ ကျွန်တော် အသာလေး ဖြေနိုင်ပါတယ်။
(ဇော်မင်း – လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး)
ရွာသားများဝိုင်းအော်သံ…..ဟိုကောင်ဒေးဗစ်…ရေခင်းလာမပြနဲ့ ဒင်းစကားကသမိုင်းဝင်ဆိုတော့ သေတာတောင်ငါတို့မမေ့ဘူး……………….
ရွာသူများဝိုင်းအော်သံ…….ဟဲ့ဒေးဗစ်ရဲ့….ဒင်းစကားကိုမေ့စရာလား….ငါတို့အပျိုကြီးဒွေယောက်ကျားယူပြီးခလေးမွေးရင်တောင် သားသားမီးမီးလေးတွေကို ဒင်းက ဒီစကားပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကို အမွေပေးပစ်ခဲ့လိုက်ဦးမယ်….မှက်ထား…….
ကိုဒေးဗစ်ရေ… အခုတော့ ရေနည်းလို့ တဲ့လားဟင် … အဟိ .. ဟိ … ။
ဂျာနယ်တွေမှာ ပလူပျံအောင်ရေးထားတာကတော့ ဓါတ်အားပေးတိုင်လေးတိုင် မိုင်းခွဲဖျက်ဆီး ခံရလို့ ဆိုပဲ … ။
ကျွန်မတို့တွေက လမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီး လိုချင်တယ်လို့ မဖြစ်နိုင်တာကို ငိုယို ပူဆာနေတဲ့ကလေးမျိုးမဟုတ်ပါဘူး ။ တစ်ချို့သော နေရာတွေမှာ လျှပ်စစ်အလေလွင့်ဖြစ်နေတာတွေအများကြီးရှိပါတယ် .. ။ မလိုအပ်ပဲ မီးတွေ ကို ထိန်ထိန်ညီးလို့ … ။ ကိုယ်တွေဖြင့် မြို့လည်ခေါင်တောင် အချင်းချင်း မှောင်မှောင်မည်းမည်း လည်ပင်းတက်နင်းကိန်း … ။ ဒီတော့လေ .. စေတနာမရှိလို့  မီးမပေးတာလို့ပဲ မြင်မိတယ် … ။ ပိုလျံလို့ ရောင်းစားထားတယ်ဆိုတုန်းကတော့.. သူတို့ ဒီရုပ်မဟုတ်ဘူး … ။ တရားကို နတ်စောင့်ပါတယ် ကိုဒေးဗစ်ရေ …ပို့စ်တင်ဆွေးနွေးတာ ကျေး ဇူးပါနော် ။
မနက်က ဂျာနယ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ် .. ဘာတဲ့ … မီးရဖို့ ..မိုးနတ်မင်းဆီမှာ ဆုတောင်းတဲ့.. အခုမှ ..တရုတ်ကားတွေကြည့်ပြီး .. လိုက်ရူးနေတယ် .. မိုးနတ်မင်းတွေ ဘာတွေ ထဖြစ်လို့ .. ရယ်လိုက်ရတာ .. အူတက်တော့မယ်
Ma Etone ပြောတဲ့ဂျာနယ်မှာရေးတာကမှနည်းနည်းသက်သာဦးမယ်ဗျာ….မိုးနက်မင်းဆီမှာဆုတောင်းတာတဲ့…… ဟို ဝက်ဆိုက်လားကြက်ဆိုက်လားသိဘူး…သူရေးထားတာကမှ ပိုမိုက်ထှာ…..ဘာတဲ့ ….. အူးသိမ်းစိမ် မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုကြိုဆိုတဲ့အတွက် မန်းလေးကလူဒွေက ဖရောင်းတိုင်ထွန်းပြီး လမ်းလျှောက်ဆုတောင်းတာဆိုဘဲ….ဟေ….ဟေ့…… သူတို့ပြောတဲ့ Media ကို Media နဲ့တိုက်တဲ့ပုံစံကတော့ တယ်မိုက်ပဲဗျို့ ……….. မှက်သားလောက်သဗျားးးးးးးးးးးး
ကိုဒေးဗစ်ရေ .. .ကျွန်မလည်း အဲ့ဒီသတင်း အီးမေးလ်ထဲမှာ ဖတ်ပြီးရယ်လိုက်ရတာ ခွက်ထိုးခွက်လန်ပါပဲ …. ။ ဘယ့်နှယ့် သမ္မတကြီးပါပါလာတုန်းနော် … ။
အဲ့ဒီသတင်း လုပ်ကြံထုတ်လွှင့်တာ … Myanmar Express ကပါ … ။ သူတို့ဆီက ဘာရေးရေး .. ပြောင်းပြန်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ရတယ် … ဟိဟိ
“သဘာဝအရ ရေနည်းနေလို့ လျှပ်စစ်မီးမရနိုင်တယ်ဆိုတာကို နားလည်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတုံးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးပြီး လျှပ်စစ်အကြောင်းသူလောက် သိတဲ့သူမရှိဘူး ၊ ပိုနေလို့ရောင်းတာပါပြောခဲ့တဲ့ အရူးရဲ့ မစဉ်းစားမဆင်ခြင်ပြောခဲ့တာကို ခံပြင်းလို့ ဆန္ဒတွေထုတ်ဖော်တာပါ။”
“ဒါဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်တဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတွေပိုနေလို့ ရောင်းစားရပါတယ်လို့ပြောတဲ့ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးက သူ့စကားအတွက် တာဝန်ယူသင့်တယ် ။(ရာထူးကနှုတ်ထွက်ပေးသင့်တယ်) ။ ပြည်သူတွေက အဲဒီစကားကြောင့်ပိုပြီးဒေါသထွက်နေတာ ။”
“အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲဗျာ…… Market သဘောတရားအရ ပိုလျှံလို့ရောင်းစားနေရပါတယ် ဆိုတဲ့လူဂျီး နှုတ်ထွက်ပေးလိုက်ရင် ဘယ်သူမှဖယောင်းတိုင်မထွန်းတော့မှာသေခြာတယ်ဗျို့….. ”
ဒါဟာ အကြောင်းရင်းပါပဲ။ လျှပ်စစ်မရှိတာ မခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ ခံနိုင်ရည်ရှိ ပြီးသားပါ။ သူ့ အမှားတွေသာ ရဲရဲ ဝံ့ဝံ့ ဝန်ခံလိုက်ရင်ွှအထိုက်အလျှေက် ဖြေရှင်းပြီးသားပါ။
အူးလေးဆိုလိုတာ တားတားတိဘီ……… သမဒကြီးသိဖို့ပဲကျန်တော့တယ်……
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ လျှပ်စစ်အကြောင်းအသိဆုံးဖြစ်တဲ့ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးအား
(မှတ်ချတ်) အလုပ်ကြမ်း = ကတုံးတုန်ပြီး ချီးပုံးထမ်း
ကျနော်တို့ ရခိုင် ကမ်းလွန်က ရွှေဂက်စ်ပိုက်လိုင်းကို နှမျောမိသဗျ။
မီးအမှောင်ကျနေတဲ့ တိုင်းပြည်ပိုင် ပစ္စည်းကို သူများဆီရောင်းစားဝံ့
တဲ့ သူတောင်းစားတွေ အဖြစ်ကို မပြောလိုတော့ပါ။
တခါတလေ ကိုယ့်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ကို ပြန်အားမရဖြစ်မိပါတယ်။
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ သူပုန်မရှိတဲ့ ပြည်နယ်က ရခိုင်
ကျနော် စိတ်နဲ့ ဆို အဲ့ပိုင်လိုင်း ဖေါက်ခွဲပစ်လိုက်မယ်။အေးရောဗျာ။
ဦးဦး နာဂရ ရေစိတ်မဆိုးပါနဲ့ သူတို့ တားတားလေးတွေ ကျောင်းသွားတက်ဖို့ လေယာဉ်ဆီဖိုး
စိတ်ရှည်လက်ရှည် နဲ့ ၊ သည်းခံခြင်းကို ပိုးမွေးသလို မွေးပြီး ၊ ဗြစ်ပတစ်ပြောတဲ့ တစ်လလောက် ဆိုတာ ကို စောင့်နေပါမယ် ခင်ဗျား ။
အခု မန်းတလေး နွေပူပူ နေပူပူ
မီးမဖြစ်စလောက် ဗို့အားမမှန် ရေမမှန် မှာ
“ဂျပန်မှာ Nuclear Facility တွေ ပြတ်သွားတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ကြောက်လန့်ပြီး Nuclear Plant တွေအကုန်ပိတ်တယ်။ အခု စက်ရုံ ၄၀ မှာ နှစ်ခုပဲ ကျန်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်မှာ မီးမပျက်ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြည်သူက ခြိုးခြံချွေတာတယ်။ အဲ့ဒီတော့ စေတနာနဲ့ ပြောချင်တာက ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဖယောင်းတိုင်တွေကို ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ထွန်းပြီး မီးလေးပိတ်ထားလိုက်ကြပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။”ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတအကြံပေး ဦးကိုကိုလှိုင်က ယနေ့(မေလ ၂၄ ရက်နေ့) ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့…..ပြည်သူတွေက ဦးကိုကိုလှိုင်အကြံပေးသလိုလုပ်လာခဲ့တာ နှစ်20နီးပါးရှိပါပြီခင်ဗျ….ညတိုင်းနီးပါး မီးကကိုယ်ပိတ်စရာမလိုပဲ အော်တိုကိုပိတ်ပိတ်သွားတာပါခင်ဗျ……..
ရေးသူကော မန့် သူကော အာကုန်ကောင်းလွန်းလို့ကျုပ်အတွက် မန့် စရာ ဘာမှ မကျန်တော့ပါဝူး..
ကျုပ်လဲ..ဟိုး ထိပ်ဆုံးက အူးလေးကြီးပြောသလိုပါပဲ..လို့ ပြောပါရစေ
ပြီးတော့ တစ်လလောက် အလှည့်ကျမီးစနစ်ကို မခံစားနိုင်တာနဲ့ဟိုအ၀ှာကြီးကိုလဲ မျက်စောင်းမထိုးစေချင်ပါဘူး
နောက်ထပ်ဆန္ဒတွေ ပြနေမဲ့အစား..ကျောက်ခဲနှစ်တုံးသာ ပွတ်ပြီး ကိုယ်တိုင် လျှပ်စစ်ထုတ်ကြပေရော့..အဲဒါမီးလာဖို့ပိုနီးစပ်ဒယ်
ဘယ်လောက်ထိရေနည်းသွားလည်းဆိုရင် 24/05/2012 ည 8 နာရီမှာရရှိတဲ့သတင်းအရ… ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံမှာ တာဘိုင် 1 လုံးပဲလည်ပြီး လည်တဲ့တာဘိုင်ကလည်း 90 မဂ္ဂါဝပ်ပဲလည်လိုက်ရပါတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျား…..